ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ပျိုပျိုမေရဲ့...
ဝန်ကြီး ကတော့ တော်တော်များများ ဝင်ကြီးလို့ပဲ ထွက်တာပါပဲ လို့ ထင်မိတယ်။
က် တ် ပ် အသံတွေကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာလဲ ပီပီပြင်ပြင် ထွက်တတ်တယ် မထင်ဘူး။ ရေးတဲ့အခါမှာသာ ဂရုစိုက်မိတာ။ စိတ်ကူးပြီး မရေးဖြစ်သေးတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ အညာက တမြို့နဲ့ တမြို့ မတူတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေအကြောင်းလည်း ပါတယ်။ တချို့မြို့တွေဆို မိုင် ၃ဝ တောင်မကွာဘဲ ကူးလူးဆက်စပ်နေပေမဲ့ တချို့ အသုံးအနှုန်းတွေမှာ တူကိုမတူတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါ အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။
ဥပမာ - ပခုက္ကူဘက်က ကွင်း ဆို ကွန်း၊ ကွန်း ဆို ကွင်း လို့ ထွက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပခုက္ကူနဲ့ ဆက်စပ်ရာ တခြားမြို့တွေမှာကျ အဲဒီအသုံး ကူးစက်သွားတာ မရှိဘူး။ ရှိလည်း နဲနဲပဲ နေမယ်။
ဘောလုံးကွင်း နားက ကွမ်းယာဆိုင် ဆို ဘောလုံးကွန်းနားက ကွင်းယာဆိုင်လို့ ထွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းတုန်းက တောင်သာဘက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှာ အဲလိုလေမျိုး ရှိပြန်တယ်။ ပခုက္ကူနဲ့ တောင်သာကျတော့ အညာချင်းတူပေမဲ့ အဆက်အစပ်က နည်းပါတယ်။
အဲဒီစာလုံးတွေကို အသံထွက်ပြီး အမှန်လိုရွတ်လိုက် အမှားလိုရွတ်လိုက်နဲ့... ဟီးဟီး...း))
မူယာမိုးတွေ ရင်မှာစဲသွားပြီ :P
Dear ko paw, is it because we have never hadachance to learn Burmese phonetic or there really don't have such prescribe course?
Very interesting! My dad is also from Kone Zaung, he always says Ga-la-be` instead of ka-la-be` (in writing ka-lar-pe`, split pea).
ကလေးတွေ စာသင်ပေးတာ အနုပညာဗျ..။ ကျွန်တော်လည်း သင်ပေးဖူးတယ်..။ ဒါပေမယ့် လက်ပေါက်ကပ်လောက်အောင် သင်ရတာမျိုး မကြုံဖူးဘူး..။
ပျိုမေ အသံထွက် မှားတဲ့ကိစ္စက တစ်လုံးချင်းဆီ ထွက်ရင်း အမြန်ထွက်ခိုင်းကြည့်သင့်တယ်..။ ဥပမာ ပျိုမေဆို ပ + ယို + မ + အေ ဆိုတဲ့ အသံထွက်တွေကို အမြန်ထွက်လိုက်တာ..။ အဲဒီကနေ ဖြည်းဖြည်းခြင်း ပုံသွင်းကြည့်ပေါ့..။
စကားမစပ်ပါ..။ ကျွန်တော် နည်းနည်းကွန့်တတ်တော့ အရေအတွက်တွေ ရေးမယ်ဆို တယောက် လို့ မသုံးဘူး..။ တစ်ယောက် လို့ ရေးတာ မှန်မယ်..။
ကျွန်တော် ကွန့်မန့်တွေ သိပ်မရေးဖြစ်ပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်လေးတွေ မျှဝေချင်စိတ်ကြောင့် ရေးဖြစ်သွားတာပါ..။
ပျိုမေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်နည်းကို ပြောပြပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
“တခု တကောင် တယောက်” ကတော့ ကျနော်လည်း ကျောင်းသားဘဝတုန်းက တစ်ခု တစ်ကောင် တစ်ယောက်လို့ပဲ ရေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးမခမှာ (ဆရာမောင်စွမ်းရည် ထင်တယ်) ပြန်ရေးပြတဲ့ အခြားစာရေးဆရာတယောက်ရဲ့ ဟောပြောပုံကို နားထောင်ပြီးတဲ့အခါ တမင်တကာ “တခု တကောင် တယောက်” လို့ သတိထားပြီးရေးပါတယ်။ (အဲဒီစာရေးဆရာရဲ့ ဟောပြောမှုမှာ “အသားတစ်တတစ်” နဲ့ “အသားတစ်တစ်တစ်” ဥပမာပေးထားတယ်။)
မခင်ဦးမေ ပြောတဲ့ “ကျွန်တော်” နဲ့ “ကျနော်” ကိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ ကျောင်းတုန်းကတော့ ကျွန်တော်လို့ ရေးပါတယ်။ အခုတော့ ကျနော်လို့ ရေးပါတယ်။ ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာထက် မူကွဲဖြစ်တဲ့ ကျနော်နဲ့ တခု တကောင် တယောက် ကို ပိုသဘောကျမိတဲ့အလျောက် ဆက်လက်သုံးစွဲနေခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဒီလိုရော ရမလား ကိုပေါ
သာယာ ။ ။ ဤဆိုင်တွင်ကွမ်းယာကိုမူတူးတစ်ယောက်တည်းသာယာပါသည်။
ကျတော် ရန်ကုန်မှာနေတုံးက HIV နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေ ပေးတုံးက
မုံရွာ ဘက်က တပည့်တွေ
ကွန်ဒုံး ကို ကွင်းဒုံး ချည်းဘတ်ကြတာ
သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်နဲ့ (သူ့အသံထွက်)နဲ့ ဖြစ်နေပြီးသား အကြောင်းအရာ.. တွေကို ပြုပြင်ဖို့ သွားကြိုးစားရင်.. ကြိုးစားသူများ မောသွားတာပဲ အဖတ်တင်မယ်....ပေ့ါနော်။ :)။